Phototherapy - ကဘာလဲ, phototherapy ၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်
ခေတ်သစ်လူ့ယဉ်ကျေးမှုအသက်အဘို့အဆင်ပြေအခြေအနေများသာဆောင်တတ်၏, ဒါပေမယ့်လည်းဿုံ phototherapy ကူညီပေးသည်ရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီး။ ရုပ်တုဆင်းတုများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအမြင်အကြောင်းအများကြီးကိုပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ပညာရှင်ရှည်လျား, များစွာသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဤဦးတည်ချက်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြ လူသား၏အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာက ။
Phototherapy - ကဘာလဲ?
ထိုက်ထိုက်တန်တန် phototherapy အဖြစ်မှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီအတွက်တစ်ဦးကအစွမ်းထက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ များစွာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်ရန်နှင့်သဟဇာတအောင်မြင်ရန်တိကျတဲ့စိတ်ပညာအစုတခုနှင့်အတူအနုပညာကုထုံး၏ဤမျိုး။ Phototherapy - ဤဖယ်ရှားပြဿနာများကဲ့သို့သောဖို့အသုံးပြုသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဧရိယာသည်:
psychotherapy မှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ phototherapy ဓာတ်ပုံတွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူ၎င်း၏အစပိုင်းကိုယူ။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိပါတယ်နှင့်မည်သည့်ရုပ်ပုံပြီးစိတ်ပျက်သောသူသည်မိမိပြဿနာနှင့်စိတ်ပညာရှင်ကဖယ်ရှားပစ်ရပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်ကိုတွေ့မြင်တင်သွင်းကြောင်းအကြံပြုအငြင်းပွားမှုများရှိပါတယ်။ သို့သော်ပြဿနာများသာ, phototherapy ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကသင်တစ်ဦးထပ်မံဖြစ်နိုင်ခြေဖွင့်လှစ်နိုင်သည်
အရှုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်နီးကပ်လွယ်ကူနှင့်ဆက်ဆံရေး restore ။
စိတ်ပညာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏သဟဇာတဖှံ့ဖွိုးတိုးတဦးချင်းနှင့်အဖွဲ့ကိုနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်စဉ်းစား။ ကနှင့်အတူသင်အတွင်းစိတ်ခံစားချက်များကိုနှင့်ပြဿနာများကိုထုတ်ဖေါ်နိုငျသောကွောငျ့ Phototherapy ရှည်လျားပြီးထိရောက်မှုသက်သေပြခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းသည်ညီမျှမှုလူတစ်ဦးအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကအောက်ပါနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ:
Phototherapy - "အဘို့အ" နှင့် "ဆန့်ကျင်"
phototherapy ၏ခေတ်သစ်နည်းစနစ်များကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ process ကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကို, ကိုစုဝေးစေ။ ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အတိုင်း, ဓာတ်ပုံများပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး, အစဉ်အမြဲပြုလုပ်အပြုသဘောဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ တချို့က ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန် သည့်အမြင်အာရုံထိခိုက်မှုမခံနိုင်ပြီး, သင်ပေါ်ပေါက်သည့်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်မရလျှင်, စိတ်ရှည်ပိုဆိုးဖြစ်လာပေမည်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကအောက်ပါအားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်:
သည် Periodic စွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း။
ဓါတ်ပုံပေါင်းများစွာနည်းစနစ်၏ပုံစံအတွက်လျှောက်ထားအထူးအခွအေနသောအဘို့လူကြိုက်များ phototherapy ။ တစ်ဦးချင်းစီကို client များအတွက်တစ်ဦးချင်းရလဒ်ထိခိုက်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကိုရှေးခယျြ။ လေ့ကျင့်ရေး phototherapy ပေါင်းစည်းသည့်အခါကပိုထိရောက်ဖြစ်နှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ရုပ်ပုံများနှင့်ကတ်များကို client များ၏ပစ္စည်းကိရိယာ Self-ရွေးချယ်ရေး။ ဒါဟာပုံများ, ဒါပေမယ့်လည်းမဂ္ဂဇင်းကနေအခုတော့ရွာသားတွေနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အခြားလူတို့ကဖန်ဆင်း technique client ကိုဓာတ်ပုံတွေ, ကအလိုအလျောက်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
self-ပုံတူအောင်၏ technique ကို;
ထိုကဲ့သို့သောမိသားစုအယ်လ်ဘမ်အဖြစ် technique ဟောင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံ collection များကို။
ဓာတ်ပုံများ၏ဖောက်သည်အမြင်အပေါ်အခြေခံနည်းပညာဓါတ်ပုံကို Project ။
Phototherapy - လေ့ကျင့်ခန်း
phototherapy များအတွက်ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းသုံးနှစ်လွန်ပြီးမှအိမ်မှာနှင့်ကလေးများနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကုထုံးအလုပ်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်, မြင်ကွင်းကိုရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သူတို့ကစံလေ့ကျင့်ခန်းနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါကုထုံး client ကိုမှချဉ်းကပ်၏တစ်ဦးထက်ပိုသဟဇာတလမ်းကိုရွေးယူနှင့်နောက်ထပ်ကတည်းဖြတ်မှုပေါင်း။ ဒါဟာတိုင်းတာစကားပြောဆိုမှုနှင့်anice လျှော့ပေါ့လေထုဖြစ်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေထဲကအများစုဟာတစ်ကြိမ်မှကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်, စိတ်ပိုင်းသည်ညီမျှမှုကလူကသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး damper အဖြစ်ဤဖြစ်ရပ်ကိုစဉ်းစား, ပြန်လာ။
Perfectionist - သူဖြစ်ပြီးပြီးပြည့်စုံသူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ?
ဘယ်လိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်များဖယ်ရှားပစ်ရ - စိတ်ပညာ
Symbiosis စိတ်ပညာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမျိုးအစားများ symbiosis ၏အဘယျနေကြသည်ပါသလဲ
သှဖေ - ကစိတ်ပညာနဲ့လူမှုဗေဒ၌တည်ရှိ၏လော
ခေါင်မိုးများအတွက် insulator တွင်လည်း
အဆိုပါစားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းသီအိုရီ: Jaden Smith ကကွန်ယက်ကဝေဖန်ဘယ်လို
တစ်ဦး elastic တီးဝိုင်းနှင့်အတူပဝါချုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နွေဦးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ဖန်လုံအိမ် - လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်း
အဘယ်အရာကိုသင့်ကလေးကိုပေးရ6နှစ်ရှိပြီဖြစ်သနည်း
ဖရဲသီး peels ၏ယို
အူအတက် - ကလေးများအတွက်လက္ခဏာများ, အကြောင်းရင်းများနှင့်စစ်ဆင်ရေးအမျိုးအစားများ